Figma: Volavola, Prototype ary fiaraha-miasa manerana ny orinasa | Martech Zone
Figma: Volavola, Prototype ary fiaraha-miasa manerana ny orinasa
Alarobia, Jolay 31, 2019 Talata, Jolay 30, 2019 Douglas Karr
Volana vitsivitsy lasa izay dia nanampy tamin'ny fampivoarana sy fampidirana ohatra WordPress namboarina ho an'ny mpanjifa aho. Ny fandanjalanjana ny fampitaovana, ny fanitarana ny WordPress amin'ny alàlan'ny saha manokana, ny karazana post custom, ny drafitra famolavolana, ny lohahevitra ho an'ny ankizy ary ny plugins manokana.
Ny ampahany sarotra dia ny ataoko amin'ny mockups tsotra avy amin'ny sehatra prototyping propriitary. Na dia sehatra matanjaka ho an'ny sary an-tsary sy famolavolana aza izy io, dia tsy mora adika amin'ny HTML5 sy CSS3. Ampio ireo famerenana hafa rehetra, ary ny androko dia somary mahasosotra ahy amin'ny fandrosoana izay tena miadana tokoa.
Ny ampahany amin'ny piozila dia ny masoivohon'ny famolavolana nanolotra ireo prototypes fotsiny, tsy nanome karazana styleheet master… ka miasa izahay hanatanterahana izany amin'ny alàlan'ny fanondranana ireo prototypes ho afaka manidina, ary avy eo mandika ny CSS amin'ny WordPress. Ny isan'ny dingana ilaina sy ny banga eo anelanelan'ny sehatra dia mahatonga azy io ho dingana sarotra. Tsy lazaina intsony ny fiezahana hanatsotra ny fahasarotana amin'ny hafainganam-pandeha sy haingam-pandeha
figma manasongadina ny ankamaroan'ity asa ity amin'ny sehatra iray ahafahana mamolavola endrika, hevitra ary fiaraha-miasa manerana ny mpikambana ao amin'ny ekipanao, ao anatin'izany:
mpamorona - Miaraha-miasa amin'ny toe-javatra sy amin'ny fotoana tena izy. Aza manahy mihitsy momba ny fisie-nao tsy lany daty na mifanindry ny asan'ny tsirairay.
mpandray anjara - Mandefasa rohy iray hanangonana valiny, hahazoana fangatahana fanovana ary avelao ny mpandray anjara hanao fanavaozana ny kopia amin'ny endriny.
mpandraharaha - Ny injeniera dia mahazo miditra amin'ny loharanom-pahamarinana ankehitriny ary afaka manara-maso ireo singa, fananana fanondranana ary kaody fandikana.
Figma dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa:
Fiasa Boolean - Miaraka amina formulazy efatra: firaisana, esorina, intersect, ary esory, azonao atao ny manambatra ireo karazana sosona endrika miaraka amina marina.
Components - Manamboara haingana kokoa hatrany hatrany miaraka amin'ireo singa azo ampiasaina sy azo ovaina manerana ireo rakitrao. Midira amin'ny sosona isaky ny ohatra mba hahafahanao manitsy sy manongotra ny lahatsoratra sy ny sary milahatra.
faneren'ny - Alaharo ny volavolanao raha mifanaraka amin'ny haben'ny efijery rehetra amin'ny alàlan'ny fanamboarana ireo zavatra ho an'ny rafitry ny ray aman-dreny, ny fakana ireo zavatra amin'ny takelaka, na amin'ny famoronana singa mifandanja aza.
Sarin'ny fitaovana - Asehoy amin'ny endrika tontolo mety ny volanao. Azonao atao koa ny misafidy ny maoderina sary sy sary.
fifandraisana - Ataovy velona ny prototypeso amin'ny famaritana ny fifandraisana amin'ny tsindry, eo am-pandehanana, mandritra ny fanindriana, sns.
takela - Miaraka amin'ny toerana misy anao sy ny tananao manokana dia voafehinao amin'ny toerana sy ny fomba fisehoana overlay.
Pixel-tonga lafatra - Ny fanitsiana ifaneraserana 60fps dia mitondra topy maso mialoha sy manondrana ary manondrana pixel.
Prototyping - Manamboara haingana ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny efijery ary manampy singa toy ny fifampiraharahana, ny tetezamita, ny overlay, ary maro hafa. Raha tokony hivezivezy amin'ny fitaovana hafa dia mizara URL fotsiny mba handraisana hevitra.
manaiky Design - Ahinjiro ny fizaranao ary jereo ny fomba hamalian'izy ireo ny fiovan'ny haben'ny efijery.
Scrolling - Alefaso mitsivalana, mijidina, na misy lalana ahodinkodina ao anatin'ny endriny tsirairay na ny endrik'ireo ray aman-dreny iray manontolo.
Styles - Ampifanaraho ny lokonao, ny lahatsoratra, ny fefy ary ny vokany amin'ny tetikasanao rehetra. Tazomy ny fomba amam-bika vitsy kokoa ary ampifanaraho amin'ny endriny samihafa ny volavolanao miaraka amin'ny fomban-tsarimihetsika miavaka amin'ny Figma.
Tranon-tranon'ny ekipa - Mizarà singa sy style amin'ny Figma - tsy mila drive iraisana na fitaovana fanampiny. Ianao sy ny ekipanao no mifehy ny fomba sy ny fotoana hanodinana ireo fanovana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny famoahana asa tsotra.
Vector Networks - Figma dia namorona ny penina fitaovana ho intuitive kokoa, mamela ny fanodinkodinana mivantana ary mitahiry ny mifanitsy aoriana-mifanentana amin'ny lalana.
Fa orinasa mpanjifa, Figma dia afaka mitondra ny tsy fitoviana, ny fahombiazany ary ny filaminana amin'ny ambaratonga. Ny sehatra dia ahafahan'ny mpanjifa orinasa mitantana mora ny rafitra famolavolana miaraka amin'ny tranombokin'ny ekipa sy ny fahaizana mampakatra sy mizara endritsoratra fanao manerana ny fikambanana. Sign-On tokana, fanaraha-maso fidirana ary hazo fisongonana no ampidirina ao.
Manomboha amin'ny sary
Figma dia manana safidy tutorial tsara izay tazomin'izy ireo Youtube channel, ity misy horonan-tsary fanombohana:
figma manome ny mpamorona fahaizana mandinika, mandika, manondrana fananana ary mandika CSS mivantana avy ao amin'ny fisie design. Azonao atao ihany koa ny mamela ny alàlan'ny workflows misy anao miaraka amin'ny fampidirana azy afaka manidina, Avocode, Jira, Dropbox, ProtoPie, ary Fitsipika ho an'ny Mac. Izy ireo koa dia manana API matanjaka.
Andramo maimaim-poana i Figma
Tags: avocodemiara-miasafamolavolanafiaraha-miasa amin'ny famolavolanafanesoana endrikaDropboxfigmaJirafanesoanaprotopienitranga fahinyfiaraha-miasa prototypefijerenaZeppelin
Infographic: statistikan'ny fampiasana zokiolona zokiolona sy Internet
Torohevitra 20 amin'ny familiana ny fifamoivoizana mifandraika amin'ny Booth Show Trade